प्रत्येक भाषा, अद्वितीय सुन्दर र बुझ्न र अध्ययन गर्न गाह्रो छ। जो मान्छे भनेर सोच्न अफ्रिकी कुल धेरै दर्जन शब्दहरू, गम्भिर रुपले गलत एक शब्दावली छ। रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, चिनियाँ, फ्रान्सेली - यो एउटा अन्य भन्दा सजिलो छ भन्न असम्भव छ। हरेक राष्ट्र यसको आफ्नै संस्कृति, भन्सार छ र अन्वेषण गर्न रोचक किनभने धेरै भाषाहरू चिन्ने मानिस, असंख्य सम्पत्तिहरू गर्न प्रमुख छ। रोमन सम्राट शत्रुहरू स्पेनिश मा - - महिलाहरु संग - परमेश्वर र इटालियन संग चार्ल्स वी फ्रान्सेली आवश्यकता आफ्नो साथीहरूसँग, जर्मन कुरा गर्न भन्नुभयो।
भाषाविज्ञान के हो?
भाषाविज्ञान गम्भीर विज्ञान हो। सबै समय मा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न मानिसहरूले प्रतिनिधिको को कुरा तुलना, भाषा सुविधाहरू अध्ययन गरिएको छ। भाषाविज्ञान - भाषा बिज्ञान को एक शाखा, संवादी बोलीको सुविधाहरू अध्ययन को आरोप मा। विज्ञान भाषा, तिनीहरूको कमीकमजोरी र तागत, विभिन्न मानिसहरूले को बोलियों बीच विभिन्नता अध्ययन गर्छ। भाषाविद् विशेष व्याकरण, शब्द को संरचना विचार गर्नुहोस्। सबै विद्वान यसलाई उत्तिकै गाह्रो छ, भाषाहरू यस्तै आधार छ कि सहमत, अझै मान्छे बढी ध्यान के तिनीहरूलाई सिकाउन के आधारमा बुझ्न छैन। तिनीहरूले एक निश्चित क्रममा, व्यक्ति अभिव्यक्ति को एक विशाल संख्या सिर्जना लागि विशेष संयन्त्र प्राप्त कि ध्वनि र शब्द को एक सेट, भवन समावेश। बहुभाषी - भाषा, आफ्नो विकास र समय परिवर्तन को एक विद्यार्थी।
भाषा बिज्ञान को मुख्य खण्डहरू
, सैद्धान्तिक र लागू व्यावहारिक: भाषा बिज्ञान को एक शाखा, बारी मा धेरै खण्डहरू मा, विभाजित छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक समस्या solves। सैद्धान्तिक भाषा बिज्ञान भाषा व्यवस्था, सिद्धान्त र नियमहरू सिर्जना को अध्ययन गर्नुहुन्छ। यो एक empirical र normative छ। यो छ रूपमा पहिलो यसलाई वर्णन, र दोस्रो कसरी कुरा गर्न देखाउँछ। वैज्ञानिकहरू, भाषाविद् भाषा,, त्यसैले अध्ययन तिनीहरूलाई बीच समानता फेला सम्बन्धित समूह तिनीहरूलाई प्रदान भाषा universals लागि देख र। डी
लागू गरिएको भाषिक मानव गतिविधि विभिन्न क्षेत्रमा भाषा कार्यहरु को परिचय संग गर्नुहुन्छ। यो सञ्चालन अनुकूलन, भाषण स्थानान्तरण लागि विशेष उपकरणहरू को विकास हुन सक्छ भाषा प्रणाली, कोडिङ सिद्धान्त र टी को स्थापना। डी अन्य यो ज्ञान संलग्न भाषा स्थानान्तरण भाषा बिज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान। यो बच्चाहरु मूल र विदेशी भाषा, अनुवाद, कला र दैनिक शब्द रचना, lingvokonstruirovanie को अध्ययन समावेश गर्नुपर्छ। भाषा बिज्ञान को सिद्धान्त को व्यावहारिक आवेदन आवेदन भाषा बिज्ञान को एक उपखण्ड सिर्जना गरेको छ।
एक भाषाबिद गर्ने हो?
भाषाविद् धेरै प्रकार मा विभाजित छन्, तर ती सबै एक लक्ष्य छ - बोलीको peculiarities एक विस्तृत अध्ययन। बहुभाषी - पेशेवर सिर्जना, कुनै पनि विशेष भाषा वा सम्पूर्ण समूह को विकास र परिवर्तन को अध्ययन मा लगे एक व्यक्ति छ। एक विशेषज्ञ विज्ञान र शिक्षा विभिन्न क्षेत्रहरू आफ्नो ज्ञान को आवेदन पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न देशहरूमा भाषाई विद्वान विभिन्न सन्दर्भ पुस्तकहरू आधारित छ जसमा विशेष संस्थाहरू सञ्चालन, शब्दकोश, पहिले unexplored बोलियों मानिसहरूका अन्वेषण गर्नुहोस्।
विशेषज्ञहरु पनि बच्चाहरु र वयस्क दुवै मूल र विदेशी भाषा को मूल कुराहरू सिकाउन पदहरू को व्यावसायिक अनुवाद मा लगे हुन सक्छ। तिनीहरूले बच्चाहरु बुझ्न र, भाषण निर्माण शब्दहरू लेखेर लागि आधारभूत नियमहरू सम्झना मदत।
के भाषाविद् हुन्?
सबै भाषाविद् तीन मुख्य भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। पहिलो भाषा अध्ययन गर्ने भाषाविद् श्रेय छ। यो मूल र विदेशी दुवै हुन सक्छ। यस्तो विशेषज्ञहरु धेरै कार्यहरू र methodically मान्छे को बोली को विशेष सुविधाहरू अध्ययन गर्न सबै आफ्नो समय बिताइरहेका मा sprayed छैन। दोस्रो श्रेणी गर्ने भाषाहरूको एक विशेष समूह को सुविधाहरू अध्ययन आधुनिक भाषाविद् समावेश छ। तिनीहरूमध्ये मंगोल, उपन्यासकार, जर्मन अध्ययन र अन्य व्यवसायीक छन्। तेस्रो समूह क्षेत्रीय भाषा अध्ययन व्यवसायीक हुन्छन्। यो Africanists, aziatisty, Americanists र अरूलाई। दिशा भाषाविद् गतिविधि पनि फरक विषय र खण्डहरू छ। उदाहरणका लागि, पृथक morphologists sintaksistov, semantistov, phoneticists।
के शिक्षा आवश्यक छ?
व्यावसायिक भाषाविद् विशेष भाषाई वा philological संकाय मा तयार छन्। तर, आफूलाई स्वीकार विशेषज्ञहरु रूपमा, यो शिक्षा छैन प्रायजसो पर्याप्त छ। बहुभाषी - एक धेरै व्यक्तित्व, नयाँ ज्ञान को खोज मा लगातार छ। उच्च philological शिक्षाको उपाधि प्राप्त गर्न एक साँचो साथै, आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक बन्न, यो स्नातक स्कूल, इंटर्नशिप वा डक्टरेट समाप्त गर्न आवश्यक छ। साथै, आवश्यकता निरन्तर आफ्नो ज्ञान नयाँ जानकारी, सबै जान्दछन् असम्भव छ, र भाषा स्थिर छैनन्, तर परिवर्तन जस्तै Replenish गर्न।
भाषाविद् को मुख्य गुणस्तर
उत्कृष्ट मैश, धैर्य, उच्च दक्षता, लगनशीलता, erudition, शिक्षा, हेरविचार, thoroughness, अनुशासन - यी राम्रो विशेषज्ञ हुनुपर्छ भन्ने मुख्य गुणहरू छन्। कुनै पनि अवस्थामा विशेषज्ञ भाषाबिद आशावादी, रहन सकारात्मक र constructively सोच्न बाध्य छ। मात्र एक भाषाबिद, तर पनि विश्लेषक - व्यापार को व्यावसायिक। को भाषाबिद, जानकारी को धेरै गर्नुपर्छ सानो विवरण ध्यान। विशेषज्ञहरु सामान्यतया थाहा कति सुन्दर र सही, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न अनुसन्धान झुकाव छ। "भाषाबिद" को अर्थ संकेत यस्तो व्यक्ति कि आदर्श लक्ष्य भाषा जान्न आवश्यक छ। यो गर्न, उहाँले उत्सुक हुनुपर्छ, शब्द र पाठ को अर्थ को लागि उत्कृष्ट सुनुवाइ र मेमोरी छ।
भाषाविद् कहाँ काम?
हालैका वर्षहरूमा यो पेशामा जवानहरूले naively भविष्यमा तिनीहरूले रोजगार समस्या आशा भनेर विश्वास किनभने विशेष लोकप्रिय छ। तथापि, रूसी भाषाविद् संस्कृति, विज्ञान र शिक्षा को क्षेत्रहरू आफ्नो ज्ञान को आवेदन पाउन सक्नुहुन्छ। यो उपाधि संग, तपाईं संस्थान, कलेज वा स्कूलमा शिक्षक प्राप्त गर्न सक्छन्। केही विशेषज्ञहरु अनुसन्धान गर्न रुचाउँछु। यस मामला मा, तपाईं यो विशेषताहरु र भाषा विकास चरणमा अध्ययन गर्न सम्भव छ जसमा अनुसन्धान संस्थानों मा एक स्थान, खोज्न आवश्यक छ। अनुसन्धान आधारित विशेषज्ञहरु वैज्ञानिक लेख, कागजात लेख्न, निर्देशिका, Kindergartens, विद्यालय र विश्वविद्यालय लागि पाठ्यपुस्तकहरु को गठन र सिर्जना भाग बनाउन।
विकास र र कम्प्युटर प्रविधिको वितरण एकदम भाषाविद् को गतिविधि को स्कोप विस्तार भएको छ। अब यी विशेषज्ञहरु सक्रिय विभिन्न कार्यक्रम को विकास र निर्माणमा संलग्न छन्, सही फारम वाक्यांश को उत्तेजित गर्दछ। बहुभाषी - शब्दहरू एक मास्टर, जहाँ यो अझै पनि काम, तर जानकारी प्रविधिहरू को क्षेत्र मा गर्दैन? लायक राम्रो व्यवसायीक विज्ञापन सुनको आफ्नो वजन, को माध्यम आम संचार, को सार्वजनिक सम्बन्ध।
कि विभाग को टाउको वा केही विश्वविद्यालयहरु मा संकाय को डीन बन्ने, सकेसम्म क्यारियर सीढी मा उच्चतम बजाइएको पुग्न धेरै विश्वास गर्छन्। त्यो आशा विज्ञान ज्याला कम मा रूपमा, धेरै मोहक छैन। घमन्डी जवान मान्छे पनि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी मा अनुवादक वा referent बसिरहेका रूपमा, व्यापार मा आफ्नो हात प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो काम योग्य भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ। सामान्य मा, फेला काम भाषाबिद समस्या छैन यो एउटा राम्रो विशेषज्ञ हुन मात्र आवश्यक छ सक्रिय जीवन शैली।
मांग मा एक पेशा कि?
भाषाविद् सामान्यतया जब पाउन सजिलो। यो पेशामा एक साधारण र अत्यावश्यक तर, केही क्षेत्रमा राम्रो व्यवसायीक सभ्य ज्याला तिर्न भनिन्छ गर्न सकिँदैन। बहुभाषी आफूलाई एक अनुसन्धान कामदार, शोधकर्ता, शिक्षक, अनुवादक, सहायक, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, कम्प्यूटर सफ्टवेयर विकासकर्ता रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत प्राथमिकता र सक्षमता आधारमा, काम को लागि चयन गर्नुपर्छ।
को अंग्रेजी भाषा बारे रोचक तथ्य: सबैभन्दा लामो शब्द को अंग्रेजी भाषामा, बोलियों, को अंग्रेजी वर्णमाला को पत्र
सुझाव र व्यञ्जनहरु: पूर्ण एक हांस कसरी खाना पकाउनु।
वेन शरीरमा: कारण र उपचार
Ron'shin Valeri: मास्टर छोराछोरीको गुप्तचरहरू
"चौथो उचाइ": एक सारांश। पुस्तकको हेरोइन "चौथो उचाइ" Gulya Koroleva
सस्तो र स्वादिष्ट - विदेश आराम